umbuzo Flight Factor Airbus A350-900 XWB
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #303 by Colonelwing
Kuba abo ukhangela kuthe indlela entle ngokwenene kwenziwe kakuhle A350 likwimo payware.
I dont ndazi nto ngaloo imveliso ,, kodwa oko akuzange ukufunda kuloo ngokutsha ,, ibonakala kakhulu.
ukhetho lwakho ,, njengoko andinamntu ngokunxulumene olusondeleyo ukuba imveliso ukukhankanya ngasentla.
Mhlawumbi umntu uzalise kwaye uthethe ngayo ezininzi ,, uzive ukhululekile ukwenza njalo Gentelmen ...
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #304 by Dariussssss
Ibhityile njengalo mntu uya kuba ezinye sims, ezifana P3D kunye X-Plane ....
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #315 by JanneAir15
Oku khangela intle Ndicinga ukuba ndikwazi ukufumana ukuba ngenxa yokuba Sikwajonge ngenxa A350 kakuhle kwaye ndicinga lo ngulo kodwa mna kwakhona Ndikhangela A380 olungileyo. Ngaba umntu nceda sicebisa kum ukuba awuyazi into Airbus A380 entle kunye namandla ukudibanisa liveries kakhulu. Ndiye udale ngesihloko ebizwa "izindululo moya" ngoko ke ukuba une siphakamiso of A380 nceda undixelele.
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo - iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #321 by Colonelwing
ukhetho Nice ukuba Airbus A350-900 XWB noJanne ,, khumbula ngayo XPlane hayi noko FSX
ukwenza nje lokuthenga befort Qiniseka ukuba unayo XPlane Sim ...
Azikho i ngaphantsi i Ndicinga ukuba ephawulekayo ukuba ngaphandle uxwebhu yokusebenza officical olunye wakhululwa kodwa Flight Factor ikwazile ukuyitsala yaye liphuhlise A350 ngokugqibeleleyo iyakholeleka X-moya. Ndijonge phambili ngenxa kuhlaziyo elilandelayo lale aicraft. Kazi koko kunyaka abasebenzisi FSX / P3D uza kukwazi ukubhabha umntu Airbus A350.
Uhlobo lokugqibela: I-2 iminyaka ye-2 inyanga edlulileyo Colonelwing.
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #323 by JanneAir15
Molo! Enkosi iinkcukacha ngenxa yokuba FSX kodwa kukho A350 yi Aerosoft leyo ngenxa FSX.
Ngendlela igama lam Janne (hayi Jeanne) kwaye mna na abafazi!
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #324 by Colonelwing
Ngoko uxolo ,, ulwazi zilungisiwe ...
Ixesha ukwenza page: 0.199 imizuzwana